Photos of Anna Jones and BBC Apologize NOW - eikoko's JimdoPage!
Photos of Anna Jones and BBC Apologize NOW
Rohingya & Arakan are too different races. Rohingya is muslim, bengali. they stay beside the road by the camps. they don't have own land. even they are bengali, bengaladish government don't accept them. Arakan isabuddhism, myanmar. there ...are not rohingya in rakhine state. we know BBC isabig broadcasting company. why they made so dangerous mistake like that, we couldn't understand. How can we believe them? they should consider that case. we need apology for their mistake.
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးဆိုတာ မြန်မာနိုင်ငံ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့မှတ်ပုံတင်ဋ္ဌါနက ညွှန်ကြားရေးမှုးချုပ် ဦးမောင်မောင်သန်းက ဘီဘီစီက မေးတာကို ပြောသွားတဲ့အသံဖိုင်ပါ
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးဆိုတာမရှိလို့လူဝင်မှု/ချုပ် ဦးမောင်မောင်သန်းပြော
ricky (Saturday, 29 October 2011 16:37)
စဉ်းစား ဆင်ခြင်ဥာဏ် ကင်းမဲ့လွန်းတယ်..။ ကိုယ်နိုင်ငံ သမိုင်းကို သေချာ မသိပဲ အသံလွှင့် ဌာနကြီးတခုမှာ သွားပြီး အလုပ်လုပ်နေသေးတယ်..။ စာများများ ဖတ်ပါ ဗျာ..။ ခင်ဗျားတို့ စာဖတ်ဖို့ အများကြီးလိုနေသေးတယ်..။ဘယ်လို မြန်မာ လူမျိုးကမှ ဒီအဖြစ်ကို လက်ခံမှာ မဟုတ်ပါဘူး..။ ကျုပ်တို့ တနိုင်ငံလုံး ဒီ မွတ်ဆလင်ကုလားတွေရဲ့ လူမျိုးရေး ၀ါးမျိုမှုးခြိမ်းခြောက်မှုနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရတာပါ..။ အဓိကကျတဲ့ မြို့ကြီးတွေရဲ့ လမ်းဆုံ လမ်းဂွ ၊ ရှေးဟောင်းစေတီ ပုထိုးတွေနားမှာ ဗလီ ဆောက်နဲ့ ခေတ်အဆက်ဆက် အုပ်ချုပ်သူ လူတန်းစားတွေရဲ့ အကျင့်ပျက် ခြစားမှုတွေကြောင့် မြို့တိုင်းမှာ လူစည်ကားတဲ့ နေရာ မှန်သမျှ ကုလားဗလီတွေ ရှိနေရတာပါ..။မြန်မာမ တွေကို ယူ.. မွေးလာတဲ့ ခလေး အားလုံး မွတ်ဆလင်ထဲကိုသွင်း..။ မြန်မာမက မြန်မာလေးတွေ မမွေးပဲ ကုလားလေးတွေ မွေးလာလို့ ကုလားအင်အားက တိုးလာပြီး မြန်မာ အင်အားတိုးဖို့က တန့်သွားပါတယ်..။ အထူးသဖြင့် မြန်မာ အမျိုးကောင်းသမီးပျိုလေးများ မွတ်ဆလင်ကုလားများကို အသိမိတ်ဆွေ အဖြစ်တောင် အသိအမှတ် မပြုသင့်ပါဘူး..။ အခါအခွင့်သင့်တာနဲ့ အကောက်ကြံဖို့ ကြိုးစားကြမှာပါ..။ ကမ္ဘာတည်သရွေ့ မြန်မာပြည်ကြီးနဲ့ မြန်မာလူမျိုး တည်တံဖို့ ခင်ဗျားတို့ ကျုပ်တို့အားလုံးမှာ တာဝန်ရှိပါတယ်...။ လူကြီးလူကောင်းဆန်ဆန်နဲ့ တောင်းပန်ပေးပါ BBC..။ ခင်ဗျားတို့ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဖို့အတွက် ခေတ်အဆက်ဆက် ပိုင်ခဲ့တဲ့ မြေတွေကိုတောင် ကုလားတွေ လက်ထဲကို အပ်တော့မှာလား...။ အမှားဆိုတာ လူတိုင်းတော့ မကင်းနိုင်ဘူးပေါ့ဗျာ..။ မှားမှန်းသိရင် အမှန်ကိုပြင်ပါ..။အားလုံးက ချီးကျူး ထောပနာ ပြုကြပါလိမ့်မယ်...။ ရခိုင်ပြည်နယ်ဟာ ခေတ်အဆက်ဆက် ရခိုင်ဘုရင်တွေပဲ အုပ်ချုပ်ခဲ့တာပါ..။
guyster (Saturday, 29 October 2011 16:41)
“I am not agree to accept these Rohinjar,as our national,BUT,do all the Burmese ,who staying in Abroad,becomes the citizens,of those country?”
kyawthu (Saturday, 29 October 2011 16:45)
ဘီဘီစီက သည်လိုမျိူးသရုပ်ဖော်ကို ထည့်ရာမှာ လူ၊ နယ်မြေ၊ ဓာတ်ပုံ၊ စာတမ်းများ နဲ့ နယ်မြေ၏ အရောင်များကို အချိန်ယူပြီး ပြင်ဆင်ထည့်သွင်းထားတာတော့ ဟုတ်ပါရဲ့။ အငြင်းပွားစရာတွေ ဖြစ်အောင် တမင်များ လုပ်ထားသလားလို့ သံသယဖြစ်စေပါတယ်။ ကန့်ကွက်ပါတယ်...။
Ddee (Saturday, 29 October 2011 17:04)
Anna jones and BBC keen your down and say apologized to Arakanese and Burmese people....Last warning.....
North Face Apex Bionic Jacket (Monday, 26 December 2011 02:21)
cheap nike air max shoes (Monday, 27 February 2012 02:15)
Muzaffer (Thursday, 05 April 2012 20:15)
Cheap designer shoes (Thursday, 26 April 2012)
air max ltd pas cher (Tuesday, 05 June 2012 04:13)
footlocker,aire max,nike pas cher,tn soldes,nike tn hommes,survetemant pas cher
Coach Online Outlet (Monday, 25 June 2012 21:02)
If you are able to keep both cover plans utilizing the same insurance broker, it could save you time and keep the two insurance policies ordered.So one can discover van and car cover policy at the cheapest charge for the company, it is best to go looking and evaluate cover firms. Perhaps you have learnt many people are coughing upalot for van insurance. Should you put some effort and study into some insurance agencies, you will discover an inexpensive quote which effort pays out for you.
http://www.coachonlineoutlet-us.org/ Coach Online Outlet
http://www.nikehyperfuselow-2012.com/ Nike Hyperfuse Low
cheap christian louboutin shoes (Tuesday, 28 August 2012 04:49)
discount christian louboutin shoes (Tuesday, 28 August 2012 04:58)
christian louboutin outlet (Tuesday, 28 August 2012 05:00)
Mulberry handbags outlet (Monday, 10 September 2012 21:20)
buytadalafilonline (Tuesday, 06 November 2012 16:04)
Foamposites sale (Thursday, 15 November 2012 02:44)
<P>soon as Nike <a href="http://www.foampositesgymgreen-sale.com/ ">Foamposites Gym Green</a> re-released your handmade jewelry identifying the idea Atmosphere Potential ninety,4seasons it was <a href="http://www.jordan3cements-ok.com/ ">Jordan3For Sale</a> before released. It's solid atmosphere padding system in the singular is actually high additional because of the white/black/grey colouring. <P>Atmosphere <a href="http://www.cheapfoamposites-2012sale.com/ ">Cheap Foamposites</a>Potential <a href="http://www.jordan3black-cement.com/ ">Cement3Black</a> BW <a href="http://www.jordan3cements-ok.com/ ">Jordan3Cements</a> <P>Mid-air Potential BW, or maybe mid-air Potential INTRAVENOUS, isa<a href="http://www.cheapfoamposites-2012sale.com/ ">Foamposites sale</a> best-selling design from the Nike Atmosphere Potential shoes and boots out of them all. <a href="http://www.cheapfoamposites-2012sale.org/ ">Foamposites 2012</a> It was before released within 1991 which is your fourth design from the similar products. Mid-air Potential BW is quite also suitable for gabber songs supporters. It might be an exceptionally sizzling piece from the hip-hop tradition in addition to style. <P>Atmosphere Potential <a href="http://www.jordan3black-cement.com/ ">Jordan3Black Cement</a> ninety <a href="http://www.cheapfoamposites-2012sale.org/ ">Foamposites Sale</a> five <P>That 7th from the Nike Atmosphere Potential casino shoe collection, mid-air Potential ninety five appeared to be <a href="http://www.foampositesgymgreen-sale.com/ ">Foamposites Sale</a>produced within 1995. It might be referred to as mid-air Full <a href="http://www.jordan3cements-ok.org/ ">Jordan3For Sale</a> Potential. Mid-air Potential 95聮s help make is <a href="http://www.jordan3cements-ok.org/ ">Retro Jordan 13</a> dependant on individual body structure in addition
巨人倍増 (Monday, 05 August 2013 01:27)
ru486 (Monday, 05 August 2013 01:30)
威哥王 (Monday, 05 August 2013 01:32)
d10催情剤 (Monday, 05 August 2013 01:36)
夜狼神 (Friday, 21 February 2014 01:31)
夜狼神 (Friday, 21 February 2014 01:34)
szczegóły (Wednesday, 18 January 2017 01:33)
seks telefon (Wednesday, 18 January 2017 14:17)
love spell (Friday, 20 January 2017 11:17)